5 Rima uye Rinovhiringidza Yemazuva Ano Kunze Horror Mafirimu - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau 5 Rima uye Rinovhiringidza Yemazuva Ekunze Horror Mafirimu
yakanyorwa na Kelly McNeely February 21, 2017
Pane chimwe chinhu nezve kutyisidzira kwekune dzimwe nyika chinokwanisa chaizvo kupinda pasi peganda rako. Zvichida zviso zvisina kujairika zvevatambi zviri nani kugadzira pfungwa yeichoicho. Pamwe ndizvo zvinowedzerwa kutarisisa pahurukuro kubva pakuverenga zvinyorwa zvidiki. Takatarisa zvimwe zvatinofarira ekunze anotyisa mafirimu zvisati zvaitika, asi panguva ino ticha tarisa kune rakasviba zvechokwadi uye rinokanganisa. Vavade kana kuvenga, vane nzira isinganetsi yekukubaya iwe mudumbu uye kumonyanisa banga.
Nekuda kwehupfupi, ndiri kuenda kuzotarisa kune emazuva ano ekutyisa mafirimu pano (kukumbira ruregerero kune Kuurayiwa kweCannibal uye Inofadza: En Grym Firimu).
Heino yangu yepamusoro 5.
Calvaire - aka Iyo Ordeal (Belgium, 2004)
Funga nezvazvo sepamuchinjikwa pakati Nhamo uye Deliverance; izvo zvinofanirwa kukupa imwe pfungwa yekuti nei iri pachinyorwa ichi. Mune firimu, muimbi wekutandarira - ari munzira inoenda kune rake rinotevera gig - anomhanyisa mune rimwe dambudziko remotokari uye anonunurwa nemushamarari anoshuvira ari ega. Iyo yakareba iyo yaakamira yakamirira isipo yemota kugadzirisa, zvakanyanya iye ari pasi peyekufungidzira kweiye asina ungeded host. Sanganisa mune yakasanganiswa yenzvimbo dzakapunzika, kumwaya kwekunyengera, uye kupwanya kwehukama uye ane dambudziko chairo pamaoko ake.
Calvaire inotakura yakasviba pfungwa yekusava netariro iyo inomira kune yemota pamusoro peiyo firimu. Kubatana kwese pakati pedu protagonist uye… chero munhu, chaizvo… kunogadzira kusagadzikana kuri kukura uko kuri kusinganzvengeki. Iko hakuna mhirizhonga yakawanda, asi zvinotyisa zvepfungwa.
Isu akataura nezvazvo Bhasikiti pamberi pane iHorror, saka kana usati watarisa, rega ichi chive chiyeuchidzo iwe chaungade. In Bhasikiti, chikwata chemapurisa asingafungire chinopinda nepaburi rekupinda kuGehena pavanogumburwa neMass Mass muchivako chakasiiwa. Inoperekedzwa neimwe mifananidzo iyo icha zvokwadi zvokwadi kunamatira newe, rwendo rwavo rwakadzika kubva murima, kupenga uye kutambudza. Zvese zvinotyisa zvinoonekwa zvinozoguma mukusangana kwavo nehunhu hwaBaba mukuteedzana kunotyisa kwekushata nekushungurudzika.
Firimu reSerbia (Serbia, 2010)
Iyi ndiyo imwe yaungangodaro uchiziva nezvayo, asi ungangodaro usina kuitarisa. Gehena, ini handina mhosva iwe, iri rakaoma firimu. Iyo rongero inotarisa kune yakachembera porn nyeredzi iyo inobvuma kutora chikamu mu "art firimu" kuitira kuti iite yakachena kuzorora kubva kubhizinesi, kungozoona kuti iye akanyorerwa mukugadzira iyo pedophilia uye necrophilia themed snuff firimu. Kupandukira, kupatsanura, uye zvakarambidzwa kuSpain, Germany, Australia, New Zealand, Malaysia, Singapore, neNorway, nechirambidzo chenguva pfupi kubva kuBrazil.
Pakati pezvinhu zvinowedzera nuance kune chero firimu, iyo tsika inokanganisa yemagariro mamiriro ezvematongerwo enyika anogona kunge ari anonyanya kufarirwa mumafirimu akasviba. Mutungamiriri Srđan Spasojević akatsanangura kuti Firimu reSerbia iri "dhayari rekushungurudzwa kwedu nehurumende yeSerbia… Ndezve simba re monolithic revatungamiriri vanokufungidzira kuti uite zvinhu zvausingade kuita. Unofanirwa kunzwa mhirizhonga kuti uzive zvazviri. ”
Vakafira kutenda (France, 2008)
Vakafira kutenda zvinotevera mukadzi wechidiki kutsvaga kutsiva kuvanhu vakamubira nekumutambudza achiri mudiki. Izvi zvinotungamira iye neshamwari parwendo runotyisa kuenda kugehena mhenyu. Ivo vari pasi pezviedzo zvakagadzirirwa kukanganisa zviitwa zvine hungwaru zvekushungurudza vakadzi vadiki mukutenda kuti kwavo kutambura kunoguma nekunzwisisa kusinganzwisisike kune nyika inopfuura iyi. Kana usiri mukuru pakutambudzwa mumafirimu anotyisa pamwe nzvenga… tsime, rakawanda runyorwa urwu… asi kunyanya, dzivisa Vakafira kutenda. Zvinotora kushungurudzwa kwemuviri kune imwe nhanho.
Vakafira kutenda yave ichibatanidzwa neNew French Extremity kufamba (pamwe ne Haute Kunetsekana, Frontiere (s), Ils, uye mukati) iyo inoratidza "crossover pakati pehupombwe, mhirizhonga yemhuka uye kunetseka kwepfungwa". Ini ndaigona kufukidza akati wandei eNew French Extremity kufamba mafirimu, asi mukufarira runyorwa rwakasiyana, ini ndinokuraira kuti uvaongorore kana uri mumusika wechimwe chinhu chakasviba.
Secuestrados - aka Akabiwa (Spain, 2010)
Matsotsi matatu akapfeka ngowani akapinda mumba mune imwe nharaunda ine madhorobha yeMadrid, akabata mhuri yekutapwa uye vachimanikidza baba kubvisa makadhi avo echikwereti. Pfungwa yacho yakapusa, asi kuuraya kwacho hakushamise. Secuestrados inoumbwa nemapfuti gumi nemaviri akareba kuti usazombosiya chiito; hapana kukurumidza kucheka kutsausa kana kusunungura kusagadzikana. Pane zvishoma zvekunonoka kuvaka, asi magumo anotakura punch.
Ndinoda kuwedzera inokudzwa kutaurwa kwe Ndakaona Dhiyabhorosi uye kusingarapiki. Iyo yekutanga ndiyo imwe yandinayo kare inokurukurwa kwenguva refu. Nezve Isingachinjiki, Ndine nguva yakaoma yekuzvitsaura sefirimu rinotyisa. Izvo zvataurwa, kwasviba segehena uye pamwe imwe yeanotyisa mafirimu awakamboona.
Ndeapi mafirimu epamusoro mashanu ekunze angave pane ako runyorwa? Tiudzei mune zvakataurwa!
firimu serbianBhasikitiCalvaryDarkKuvhiringidzavatorwakutyisa kwekunzezvisingachinjikiKidnappedvafira kutendasecuestradosdambudziko
Kelly McNeely kunwa tii, kugadzira zvigadzirwa, machete inoshandisa screen junkie ine hutano hwakanyanya kutyisa nekutyisa, makumi mapfumbamwe ekuita mafirimu, uye yekushongedza imba yekushongedza. Munyori wevashandi weHorror.com, iye akapawo Grim Magazine, Yemazuva Horrors, CGMagazine, Salem Horror Fest, 90 Elm, uye Netflix Hupenyu. Unogona kumuwana achigadzira mafesita epamba paCreepy Crafter paFacebook, kana kumutevera pa Twitter ne Instagram @kellsmcnells
Yakasarudzika Creepshow Comic Kugadziriswazve Kutenga Iyi Chitubu!